Obbo Leencoo Lataa: ‘‘Sababa dullumaan dura-aantummaa gadhiisuu nan fedha’’ - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Dura taa'aa Adda Dimookiraatawaa Oromoo, Obbo Leencoo Lataa
Dura taa'aan Adda Dimookiraatawaa Oromoofi qondaallii duraanii ABO Obbo Leencoo Lataa dura-aantummaa dhaaba isaanii irraa akka ka'u fedhan himan.
''Akka jaarsa tokkootti warra dardara gorsina''
Obbo Leencoo: Lakki siyaasa keessaa hinbahu. Yoo dhaabni kiyya eeyyee jedhe hogganummaa gad-lakkisuu nan barbaada. Hojii polotikaa hamman gaafa du'utti dhiisuu hin danda'u. Gaafatamummaa qofa gadhiisuu barbaada. Garuu, murtiin kan dhaabaati.
Dura aantummaa irraa nan ka'a jettan. Gaaffii kana dhaaba keessanif dhiheessitanittuu?
Obbo Leencoo: Eeyyee. Amma walgahiitu ta'a. Walgahi sana irratti murtiin godhama jedheen eega.
Maaliif garuu dura-aantummaa irraa ka'u feetan?
Obbo Leencoo: Lakki sana yoon barbaade boru iftaan galchuu nan danda'a waan lammummaa alagaa sana. Kuni dhibdee biraa hinqabu.
Hoggantummaa irraa ka'uf fedhuun keessan hoggantoota paartii biroof ergaa dabarsu qabaa?
Ammaan booda jireenyi keessan eessa ta'a?
Obbo Leencoo: Isa irratti hundaa'uudhaan boriifi iftaan konfiransii nama dhibba lama hirmaachisu walitti qabaa jirra. Isa irrattin waraqaa dhiheessa.
Qorannoon suni waa'ee maaliiti?
Obbo Leencoo: 'Reform or Revolution.' Biyyi kuni rifoormii hinbeeku rivolishinii (warraaqsa) malee. Kanaaf, amma dhama'iinsa guddaatu jira. Nuti rifoormii dhumti kuni itti fufuu qabaa yaada kanaan dura warraaqsa jennuu malee sana yoo dhiifne ta'a kan jedhu ta'a gorsi keenya.
Obbo Leencoo: Siyaasa keessaa akkamittan baha. Jireenyi guutuun siyaasa. Hogganummaan gadhiisa malee, polotikaa danda'ee hin dhiisu.
Dhaabni keessan boordii filannoo jala akka galmaa'u akka hojjetaa jirtan himtanii turtan. Isa milkooftanii?